Arsenaal, Man U fi Cheelsiin taphoota har'aa injifannoon goolaban - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Arsenaal, Man U fi Cheelsiin taphoota har’aa injifannoon goolaban
Priimer Liigii Ingiliiz sadarakaa 1faa hanga 4ffaa kan dhunfatan Cheelsii, Arsenaaliifi Kilboota Manchastar lamaan
Taphoota sanbata har’aa kilaboota Priimer Liigii Ingiliiz heddu jiddutti geggeeffameen kilaboonni gabatee Priimer Liigii irrati sadadarkaa ol’aanaa irra jiran hundi morkattoota isaanii moo’achuu danda’aniiru. Hunda caalatti injifannoon har’aa kan Arsenaal jechuun nidanda’ama. Arsenaal garee Liivarpuul 4 – 1 injifateera. InJifannoon kuni Arsenaal Priimer Liigii irratti akka gara sadarkaa 2ffaa ol siiqu isa taasiseera. Arsenaal goolii 3 boqonnaa dura kan laakkosfiise. Heector Beleriin, Uuzul, Saancheeziifi Jiruun taphattoota Arsenaaliif goolii kiyyoo keessa marmarsaniidha. Gareen Arsenaal taphoota gurguddaa taasise 11 keessaa 10 moo’achuu danda’eera.
Bifuma wolfakkaatuun gareen Manchastar Yunaayitid garee Astoon Vilaa 3 – 1n moo’achuu danda’eera. Ander Hereeraa ( goolii 2) fi Ruunii turan kan gooliiwwan Manchastariin injifannoon geessan kan laakkofsiisan.
Gareen Cheelsii tapha har’aa injifannoon xumuruun isaa addaddummaa qabxii Cheelsiifi kilabii sadarkaa 2ffaa irra jiru gara 7tti olkaaseera. Cheelsiin dirree isaa irratti Stook Siitii wojjiin taphateeti kan 2 – 1n injifate. Hazaardiifi Reemyiidha goolii kan kiyyoo keessa marmarsan.
Previous articleGorsa daldalaa 7 yeroon hinshaarre kan daldalaan hundi hubachuu qabu
Next articleSouth Sudan rebels: Ethiopia United Patriots Front (EUPF) fights alongside South Sudan Government